UK oo lagu eedeeyey basaasida bulshada laga tiro badan yahay - Horseed Media • Somali News
UK oo lagu eedeeyey basaasida bulshada laga tiro badan yahay
HayÔÇÖadaha u dooda xaquuqul Insaanka ee dalka Ingiriiska ayaa banaanka soo dhigay barnaamij qarsoodi ah oo ay dowlada UK┬á u adeegsato basaasida iyo xakameynta bulasha laga tiro badan yahay sida Muslimiinta dalkaasi.
Ururka u dooda xaquuqda Rayidka ee loo yaqaan Liberty ayaa xogtan shaaciyey, barnaamijkan oo ay dowlada UK sheegtay inay uga hortageyso kooxaha xagjirka ah iyo dhalinta u nugul xajirnimada, waxayna xukuumada si qarsoodi ah u kaydin jirtay xogta xasaasiga ah ee shacabka aan wax danbi ah gelin tani oo ka duwan qorshihii barnaamijkan loo aasaasay.
Dad badan oo aan danbi gelin ayaa la sheegay in xukuumada xogtooda ku kaydisay barnaamijkan oo ah mid ay dowlada u adeegsato in shaqaalaha dowlada iyo hayÔÇÖadaha adeega bulshada sida macalimiinta ay kusoo gudbin karaan dadka ay uga shakiyaan xagjirnimada, hase yeeshee waxaa muuqata in barnaamijkan ay dowlada u adeegsato inay basaasto dadka kasoo jeeda dadka u dhashay bulshada laga tiro badan yahay.
Baaritaan horey loo sameeyey ayaa lagu ogaaday in qofka muslimka ah uu 50 jeer ugu nugul yahay in dowlada ay ku darto diiwaanka dadkaasi ay xogtooda kaydsato.
Ururada u dooda muslimiinta Uk ayaa sheegay in dadka muslimiinta ah ee diiwaankan lagu daro xataa hadii aysan ahayn kuwo ku lug leh falal xagjirnimo ama danbi gelin hadana noloshooda ay saameyn weyn ku yeelato cadaadiska uga yimaada hayÔÇÖadaha dowlada.